I-Semalt Expert inikeza i-Tutorial ye-Optimization Site
Abanikazi bezentengiselwano kufuneka baqonde ukuba ukuphucula isayithi yabo iinjini zokukhangela i-akhawunti engama-25% kuwo onke amanqaku e-SEO. Le nqaku elandelayo yinto elula, kwaye igqibelele ekufundiseni ukulungiswa kwesayithi. Kuza kulungelelanisa nawuphi na omtsha kwi-SEO, okanye nawuphi na umntu onqwenela ukwenza okulungileyo kwi-site yabo yokwenza ngcono.
Esi sikhokelo, esinikwe nguMichael Brown, uMphathi weNtengo kaMthengi we-12 (Semalt , unemiba elandelayo:
Esinye seziganeko ezindala zewebhusayithi ngumxholo wetekisi. Ikunceda lula lula indawo. Kususela ngoxa abantu bephuhlise amaziko, itekisi yeetekisi ibonakale inenzuzo. Ngaloo ndlela isebenza njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu xa kuziwa ekulungiseni.
Uxinzelelo lwegama elingundoqo
Naliphi na i-SEO yokusebenza, kufuneka kubekho ubungqina begama elingundoqo. Amagama angundoqo ayingxondorha yekonke ye-SEO campaign . Nayiphi na i-SEO engabandakanyi amagama angundoqo kwisakhiwo sayo ayinaso isiseko esiqinileyo kwaye ayiyi kuphucula isimo sezo shishino kwi-intanethi. Enye yeendlela abantu abanokuyifunda ngayo indlela yokuphucula ukusetyenziswa kwewebhusayithi kwi-site ukuqonda ukuba yiyiphi intsingiselo yegama elingundoqo, kwaye yintoni na malunga nayo.
Igama eliphambili lokuPhakamisa, ukuPhepha, ukuPhepha
Amagama angundoqo abandakanya ezininzi zeendlela xa kufikelelwe ekusebenziseni. Kukho ezinye izinto ezenza ithintelo lamagama athile ngexesha lokwenziwa kwe-site..Omnye kufuneka aqonde ukuphakama, ubukhulu kunye nokufutshane. Ngazo zonke ezi ngcamango ngombono, umnini wewebhu unokusebenzisa amandla kunye nokubeka amagama angundoqo kumxholo abathumelayo.
Enye yeendlela eziqulathwe kwisayithi zinokufumana i-traffic yoninzi ukuba zibe nemithombo yangaphandle edibanisa kwisiza. Ezi zibizwa ngokuthi izixhumanisi eziphumayo. Umnini wewebsite unokufumana ii-link ukusuka kwimithombo eyaziwayo neyaziwayo. I-intanethi igcwele iinqonkqo kwaye rhoqo xa kukho enye inqakraza kwikhonkco, kukho ithuba eliphezulu lokuba lidlulisele kwelinye iphepha. Kwi-SEO, enye indlela yokuqonda indlela yokwenza isinyathelo phambili kwi-SEO ukulungiswa kukukwazi ukufumana nokulawula izixhumanisi eziphumayo. Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele ukusetyenziswa kwegama elifihliweyo kwiinqhagamshelo ezibonelelwe.
Ngokwazi lwezixhumanisi eziphumayo, enye into yokufunda malunga nokusetyenziswa kwe-SEO yesithombe. Unokukunceda umnini kakhulu kunokuba imifanekiso idibanisa ulwazi oluninzi oluyinkimbinkimbi ngendlela umntu omtsha angayiqonda ngayo i-SEO. I-tutorial ibandakanya isikhokelo malunga nendlela abanikazi bewebhusayithi abanokwenza ngayo indawo yabo imifanekiso kwimifanekiso. Imifanekiso yoncedo nge-SEO xa i-Alt Text ifakiwe kwiinkcazelo zabo. Kwakhona, enye inokwenza ngcono isihloko somfanekiso ukufaka amagama angundoqo. I-tutorial ichaza ukuba okanye ingayitshintshi igama lefayile lichaphazela i-SEO.
Izixhobo zendawo zokuncedisa ngokukhawulela isakhiwo sewebhu. Ngaloo ndlela, iinjinjini kunye nabathengi bakuthola kulula ukuhamba ngewebhusayithi. I-sitemap kwisayithi yindlela enye yokuphucula isakhiwo se-SEO ukuphucula amava omsebenzisi kunye ne-engine algorithms.
I-URL ye-slugs ibhekisela kwidilesi ngqo yewebhusayithi enye okwangoku iphequlula. Bamele indawo yamaphepha ewebhu kumbuzo. Xa enye ifaka i-URL kwibha yeedilesi, i-URL ye-slugs ichaza indlela umsebenzisi angena ngayo iphepha lewebhu. Ngenye yezona zinto zibaluleke kakhulu zokwenza ukulungiswa kwesayithi.
Ukudibanisa kwangaphakathi konke malunga nokuqinisekisa ukuba onke amaphepha kwisayithi axhunyiwe kunye. Oku ngaphezu kokuhamba kunye nokucebisa.